लगाएर उड्न सकिने जेट–सुट- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
लगाएर उड्न सकिने जेट–सुट
श्रावण ८, २०७५ दिनेश यादव
काठमाडौँ — आकासमा उडान भर्नका लागि मानिस प्लेन चढ्छन्, कोही बेलुनमा उड्छन्, कोही प्याराग्याडिङ गर्छन् । तर, अब व्यक्तिगत उडानका लागि जेट–सुटकै अविष्कार भएको छ ।
अविष्कार मात्रै हैन, विक्री समेत शुरु भइसकेको छ । बेलायतको लण्डनस्थित एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट यसको विक्री थालिएको छ । विभिन्न वस्तुहरुको कारोबार गर्ने बेलायतका पूर्व व्यापारीहरुले उत्पादन गरेको जेट–सूटको विक्री शुरु भएको हो । यसको मूल्य करिब पाँच करोड रुपैयाँ (४ लाख ४६ हजार ५ सय २२ अमेरिकी डलर) निर्धारण गरिएको छ ।
हावामा उड्ने चाहना राख्ने जेट–सुटका पाइलटले हात र पिउँठुमा चार वटा साना जेट इन्जिनसहितका विशेष सुट लगाउनु पर्छ । सुटमा इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण र ३ डी प्रिन्टिङ समेत जडान गरिएको छ । यो लगाएपछि सुपरहिरो ‘आइरन म्यान’ को सम्झना गराउँछ । जेट इन्धन या डिजेल/मट्टितेलबाट चलाए ५१ किमी प्रतिघन्टाको गतिमा १२ हजार फीट (३ हजार ६ सय ५८ मिटर) उचाईसम्म उडन सक्छ । यतिका रेकर्ड नै सुटले बनाइसकेको छ । यसो त यसका अविष्कारक रिचर्ड ब्राउनिङले सुरक्षाको दृष्टिले जमिन भन्दा केही माथि मात्रै उडान गर्दा राम्रो हुने सुझाएका छन् । उनले यसको प्रदर्शन हालै विश्वभरी शुरु गरिएको घोषणा गरे । गत बुधबार विलासी डिपार्टमेन्ट स्टोर ‘सेल्फ्रिज’ बाहिर एउटा सानो बन्द सडक माथि गरिएको उडान पछिल्लो हो ।
डिपार्टमेन्ट स्टोरले उपभोक्ताहरुका लागि तयार पारिएको संस्करण बेच्न शुरु गरेको छ । ‘यो होभर (स्थिति) मा लगभग चार लिटर ईन्धनको खपत गर्छ, यतिका ईन्धनले सजिलै तीनदेखि चार मिनेटसम्म सुट लगाएर आकाशमा उड्न सकिन्छ’ ब्राउनिङले भने, ‘हामीसंग एउटा अर्को संस्करण पनि छ, त्यो निश्चित रुपमा चिसो मौसममा उपभोक्तालाई उडानमा सहयोग गर्न सक्छ, जुन ९ मिनेटसम्म त्यति नै परिणामको ईन्धनबाट उडन सक्छ ।’ उनले यसमा थप सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘तर बिना पखेटाको लगातार आकाशमा उड्न सक्नु हाम्रो ठूलो उपलब्धि र सुटको मौलिक विशेषता हो’ उनको भनाई छ ।
‘रोयटर्स’का अनुसार बिक्रीका लागि राखिएको स्टोरमा जिज्ञासुहरुको भीड उर्लिएको छ ।
विक्रेताले दर्शकहरुका लागि हेर्न मात्र होइन, भर्चुअल रियलिटी (भिआर) संस्करणको परीक्षण समेत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । कसैले यो सुट खरिद गर्ने निर्णय गरे कम्पनीले प्रशिक्षणसमेत दिने व्यवस्था गरेको छ । जेड–सुटको गजबको आनन्द लिन खरिदकर्ताले कम्तीमा तीन दिनको प्रशिक्षण लिनु पर्छ । ब्राउनिङले भने, ‘यदि तपाई दर्शकका रुपमा मात्र हेर्न चाहनु हुन्छ भने शायद तपाई जेट–सुट वरपर निकै गर्मी महशुश गर्नु हुनेछ । यसले ताप बढी उत्सर्जित गर्छ ।’ उनले यो सुटलाई आश्चर्यजनक अविष्कार भनेका छन् । किनभने यो मानिसलाई हानी पुर्याउने खालको छैन । ‘यो सुट लगाएर उड्नेहरुले सभ्य शैली अप्नाउन बाध्य हुने गर्छ’ उनले भने ।
एम्याचर इन्जिनियर ब्राउनिङले आफ्नो एयरशो गरिरहँदा शनिबार हजारौंको संख्यामा दर्शकहरु उपस्थित भएका थिए । ‘यो सुट लगाएर खुला आकाशमा सजिलै उडन सकिन्छ । अत्यन्तै स–साना उपकरणहरु जडित यो सुटमा उडान केही महंगो भने छ । किनभने यसलाई धेरै ईन्धन चाहिन्छ । फेरी यो कोलाहलयुक्त पनि छ । त्यसैले यसमा सुधार गर्ने सोच पनि हाम्रो छ’ जेट–सुट निर्माता कम्पनी ग्र्याभिटी इन्डस्ट्रिज्का संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) समेत रहेका ब्राउनिङले भने, ‘सैन्य गतिविधि, खोज र उद्दार जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा यसको प्रयोग गर्नु बढी उपयुक्त हुनेछ । तर सुपरहिरो बनेर उड्ने सपना देख्नेहरुले यसको अनुभव चाही पक्कै लिन सक्ने छन् ।’
‘युरोन्युज’ जेट–सुटको तौल २७ किलो छ । यसमा ईन्धनबाट ग्यास उत्पन्न गर्ने पाँच वटा टर्बाइन यन्त्रहरु जडान गरिएका छन्, जुन हातमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, शरिरको पछाडि चाहिं कार्बन फाइबर जडान गरिएको छ । आफ्नो शरिरको चालसंग यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । रोयल मरिन रिजर्भ एन्ड कमोडिटिजका पूर्व व्यापारीहरुले १२ महिनामै यो सुट बनाएका हुन् । ब्राउनिङ्ले १८ मुलुकमा ५० वटा जति उडान गरेपछि विक्रीका लागि बजारमा ल्याएको बताए ।
यसले दशौ हजार फ्लोअर्सलाई सामाजिक सञ्जालमा आकर्षित समेत गरिसकेको छ । शरिरद्वारा नियन्त्रित सबैभन्दा तीब्र गतिमा उड्ने जेट इन्जिन भएको पावर सुटका लागि उनी ‘गिनिस विश्व रेकर्ड’ समेत बनाएका छ । ब्राउनिङले सन २०१९ मा पानीमाथि दौड्न सकिने हजार हर्सपावर (एचपी) को जेट सुट बनाउने बताएका छन् । शनिबार विक्रीका लागि राखिएको जेट सुटको क्षमता भने १०५० हर्सपावर (७८३किलोवाट) रहेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १५:५७
यसकारण हुन सकेको छैन प्राडा केसीसँग वार्ता
श्रावण ८, २०७५ रमेश लम्साल/रासस
काठमाडौँ — सरकारले अस्पतालमा आधारित अनशन जारी राखेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसीसँग वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि गत असार ३२ गते नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
प्रा डा केसीको अनशन मंगलबार २५औँ दिनमा जारी छ तर डा केसी ‘अधिकार नभएको’ समितिसँग वार्ता नगर्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीसँग अनौपचारिक-औपचारिक संवादसमेत गर्न तयार देखिएका छैनन् ।
प्रा डा केसीको नजिक रहेका केही चिकित्सक र सहयोगीको भनाइ पनि त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्ताका माध्यमबाटै प्रा डा केसीसँग समस्याको समाधान गरिने बताउँदै आएका छन् । नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले वार्ताबाटै समस्याको समाधान गरिने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताए ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रा डा केसीका नाममा अराजकता मच्चाउन खोजिएको र त्यसमा चरम राजनीति गरिएको बताए । उनले ठूला ठूला समस्यासमेत वार्ताका माध्यमबाट समाधान भएको तथ्य पेस गर्दै प्रा डा केसी प्रकरणसमेत संवादमार्फत हल हुने र त्यसमा सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे । वार्ता नै हुन नदिने अवस्था आउनु भने दुःखद् रहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले वार्ताका लागि पटक पटक पहल गरे पनि प्रा डा केसीका तर्फबाट उनी स्वयं नै वार्तामा बस्ने वा उनको आधिकारिक वार्ता सदस्य वा टोली को हो भन्नेबारेमा पत्ता लगाउन सकेको छैन । सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने भन्ने प्रा डा केसी निकटका चिकित्सकको भनाइ र व्यवहार नै वार्ता विरोधी देखिएको छ ।
प्रा डा केसीका सहयोगी डा अभिषेक शाह अधिकार नभएको सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता हुनै नसक्ने ‘बटमलाइन’मा प्रा डा केसी रहेका बताउँछन् । प्रा डा केसीले कस्तो वार्ता टोली खोजेका हुन् भन्ने प्रश्नमा डा शाह भन्छन्, 'अधिकारसम्पन्न मन्त्रिस्तरीय वार्ता समिति गठन हुनुपर्छ । अधिकार नै नभएको कर्मचारीसँग वार्ता हुँदैन ।'
सरकारको वार्ता टोलीसँग प्रा डा केसीको पहुँचलाई उनका नजीक र सहयोगी भनिएकाहरुले नै रोकेका छन् । सरकारी चिकित्सकलाई उपचार गर्न नदिने, स्वास्थ्यावस्थाका बारेमा जानकारी लिन नदिने र सरकार वार्ता गर्न चाहँदैन भन्ने प्रचार गराउने काममा उनीहरु सक्रिय देखिएका छन् । सो बारेमा भने डा शाहले थप प्रतिक्रिया दिनै चाहेन ।
सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक एवं सचिव बराल वार्ताका लागि आफूहरु तयार रहे पनि प्रा डा केसी पक्ष वार्तामा नआएको बताउँछन् । 'उहाँहरुसँग अनौपचारिक वार्ता जारी छ तर प्रा डा केसी पक्षको आधिकारिक वार्ता टोली को हो भन्नेमा अन्योल रहेको छ', सचिव बरालले भने ।
अधिकार नभएको भन्दै सरकारको आधिकारिक वार्ता टोलीसँग संवाद गर्न तयार नदेखिनुले उनीहरु वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न तयार छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । वार्ता नभएको भन्दै प्रा डा केसी समर्थक चिकित्सकले आन्दोलनका नाममा सरकारी अस्पताल बन्द गरेका छन् । बिरामी उपचार नपाएर निजी अस्पताल वा क्लिनिक धाउन बाध्य छन् ।
जनताको सेवा गर्ने भनेर कसम खाएका सरकार मातहतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसमेत अत्यावश्यक सेवा बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकको ठाडै हनन गरिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघका नाममा बहिरङ्ग विभाग बन्द गर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन भएको छ । संघको सोमबारको विज्ञप्तिमा समेत बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग सेवासमेत बन्द गर्न भनिएको छ ।
संवादका आधारमा समस्या समाधान गर्न नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत पहल गरेका छन् । उनले प्रा डा केसीका सहयोगीसँग छलफल गरेका छन् । प्रा डा केसी पक्ष भने ‘टसको मस’ देखिएको छैन । सरकार वार्तामा बोलाउने तर प्रा डा केसी पक्ष वार्तामा नआउने र वार्ता नै नचाहने प्रवृत्तिले निम्त्याउने परिस्थितिको जिम्मेवार को बन्ने भन्ने चिन्तासमेत बढेको छ । नेकपाले प्रा डा केसी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘राजनीतिक रोटी’ सेक्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिएको प्रतिक्रियासमेत समस्याको समाधान गर्नेतर्फ देखिँदैन । उनले आफ्नो पार्टीले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन् । जननिर्वाचित संघीय संसद्को अधिकारलाई हनन गरेर विगतमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु पारित हुनुपर्छ भन्ने उनको टिप्पणी छ तर संसद्को स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्न भने प्रमुख प्रतिपक्षले नै अवरोध गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकसमेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण स्थगन भएको छ । सरकार वार्ता र संवादबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्न तयार भए पनि वार्ता नै नगर्ने र हुन नदिने जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो बनाउन नसक्ने जानकारको भनाइ छ ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १५:४२
थप केही विज्ञान र प्रविधिबाट
फेसबुक प्रयोगकर्ता बढेको बढ्यै
ट्रिनिटी कलेजमा साइटेक म्यानेजमेन्ट एक्स्पो
आइफोनमा जासुसी गर्न मिल्ने समस्या
सूचना प्रविधि मेला सुरु
हुवावेमाथि विश्वभर शंका
इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सयाप र म्यासेन्जर एकीकृत गरिने
अपडेटः बिहीबार, ८ असोज, २०७७ । १८ : ४० बजे
पहिरो र कृषि
मधुकर उपाध्या आश्विन ८, २०७७
सिन्धुपाल्चोकको घुम्ताङको पछिल्लो घटनाले पहिरोलाई एकपटक पुनः सार्वजनिक चासोको विषय बनाएको छ । विगतका तुलनामा यस वर्षको व्यापक र कतिपय स्थानमा अकल्पनीय क्षतिले के प्रस्ट...
यो कस्तो पञ्चायती !
चन्द्रकिशोर आश्विन ८, २०७७
तेह्र वर्षकी किशोरीलाई आफ्नै बलात्कारीसँगै बिहे गर्न लगाइन्छ । पीडितलाई प्रहरीसमक्ष पुग्न दिइँदैन । आर्थिक लेनदेन गराएर घटना सामसुम पारिन्छ । बोक्सी आरोपमा महिलामाथि सार्वजनिक रूपमै हिंसा गरिन्छ ।...
कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा
हरि रोका आश्विन ८, २०७७
विभिन्न कोणबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विमर्श सुरु भएको छ, जसको स्वागत गर्नैपर्छ । मुलुकमा कम्युनिस्टका नाममा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेर खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार सत्तासीन छ । र,...
सम्पादकीय आश्विन ८, २०७७
सरकारी कार्यपद्धति कतिसम्म मनोमानीपूर्ण छ र यसले एकदमै गम्भीर एवम् संवेदनशील मामिलामा समेत कुन हदसम्म बुझ पचाइदिन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो, इ–पासपोर्ट छपाइमा देखिएको बारम्बारको...
दक्षिण एसियामा विज्ञान कूटनीति
उत्तमबाबु श्रेष्ठ आश्विन ७, २०७७
१५ जुलाई १९७५, रुसी अन्तरिक्ष यान सोयुज, दुई अन्तरिक्षयात्री एलेक्सी लिओनोभ र भ्यालेरी कोवासोभलाई बोकेर कजाकिस्तानस्थित रकेट प्रक्षेपण केन्द्रबाट आकाशतर्फ लाग्यो । त्यसको केही घण्टापछि...
स्वायत्त राजधानी मेट्रो सिटीको आवश्यकता र औचित्य
डा. शेषरमण न्यौपाने आश्विन ७, २०७७
हालै ललितपुर महानगरपालिकाका नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १८ वटै नगरपालिका मिलेर आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । यसका लागि समन्वय र प्रभावकारिताका लागि...
भोकमरीमा राहत : जिम्मेवारी कसको ?
डा. विमला राई पौड्याल आश्विन ७, २०७७
विश्व खाद्य कार्यक्रमले द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक मन्दीका कारण सन् २०२० मा ५५ देशमा १३५ मिलियन मानिस चरम गरिबी र भोकमरीबाट ग्रस्त हुने आकलन...
चिनियाँ नाका खोल्न पहल गर
सम्पादकीय आश्विन ७, २०७७
चीनले कोभिड–१९ संक्रमित भेटिएको भनेर केरुङ नाका र तिब्बतको नेलाम क्षेत्रमा स्थानीय ताल फुट्ने सम्भावना भएको औंल्याउँदै तातोपानी नाका ठप्प पारेको तीन साता भैसक्यो । नाका...
सीके लाल आश्विन ६, २०७७
आजभोलि कालकटनी आफैंमा एउटा चुनौती बन्न पुगेको छ । महाव्याधिको विस्तार मापन गर्ने भौतिक जाँच घट्दो छ । रोगले समाएका व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दो छ ।...
आमाले बिगारेका छोराछोरी !
कल्पना भण्डारी आश्विन ६, २०७७
बच्चा हुँदादेखि नै गाउँघरतिर सुन्दै आएको वाक्यांश हो, ‘आमाले बिगारेका छोराछोरी’ । सानै हुँदा वल्लोपल्लो घर, मामाघर, फुपूघर जता गए पनि सबैका मुखबाट सुनिन्थ्यो यो वाक्यांश ।...